नेपाली अनुहार र नाम भएका ‘राधे’ फिल्मका हेण्डसम भिलियन को हुन् ? « Janata Samachar
काठमाडौं । यो साता रिलिज भएको भारतीय अभिनेता सलमान खानको फिल्म राधेले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएको छ । डिजिटल प्लेटफर्ममा रिलिज भएको यस फिल्मले राम्रो व्यापार गरिरहेको छ । तर फिल्म हेर्ने दर्शकहरु भने निराश भएका छन् । फिल्मको घिसिपिटी कथा र फितलो प्रस्तुतिका कारण राधेलाई सलमानको करियरकै खराब फिल्म मध्ये एकमा गन्न थालिएको छ ।
तर यही फिल्म राधे हेर्ने नेपाली दर्शकहरुको नजर भने फिल्मका एकजना भिलियनमाथि परेको छ । फिल्ममा लोटा नामक भिलियनको भूमिकामा देखिएका ती कलाकारको अनुहार नेपालीसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले नेपाली दर्शकहरुले उनको बारेमा चासो राखेका हुन् । आकर्षक जीउडाल भएका ती कलाकार साङ्गे छेल्टिम हुन् । नेपाली नाम र अनुहार भए पनि उनी नेपाली भने होइनन् । उनी भुटानका नागरिक हुन् र भुटानमै बस्छन् ।
राधे नै छिरिङको पहिलो फिल्म हो । वास्तविक जीवनमा भने उनी भुटानी सेनाका पूर्व क्याप्टेन हुन् । बडि बिल्डिङका सौखिन उनले सेनामा छँदै बडि बिल्डिङको प्रशिक्षण लिएका हुन् । उनले थुप्रै बडि बिल्डिङ प्रतियोगिताहरुमा प्रतिस्पर्धा समेत गरिसकेका छन् । हाल भुटानको थिम्पुमा बस्ने छिरिङ घर जग्गाको कारोबारी हुन् ।
दबङ्ग ३ को सेटमा सलमानसँग भेट
छिरिङको अभिनेता सलमान खानसँगको पहिलो भेट दबङ्ग ३ को शुटिङको समयमा भएको थियो । सलमानसँग सहकार्य गर्दै आएका छिरिङको एकजना नजिकका मित्रले उनलाई सलमानसँग भेट गराइदिएका थिए-‘साथीले जाउँ भनेपछि म पनि उनीसँगै दबङ्ग ३ को सेटमा गएको थिएँ । उनले भनेका थिए यदि तिमी भाग्यमानी छौ भने सलमानसँग भेट्ने अवसर मिल्नेछ । नभन्दै म भाग्यमानी सावित भएँ । अर्थात सलमानसँग भेटेर कुरा गर्न र सँगै फोटो खिच्ने मौका समेत पाएँ,’ छिरिङले समाचार एजेन्सीलाई बताए ।
‘मैले त्यसअघि कुनै सेलिब्रेटीलाई भेटेको थिइनँ । त्यसमाथि सलमान जस्तो ठूलो स्टारसँग भेट्दा म निकै नर्भस भएको थिएँ । तर उनी निकै महान रहेछन् । मलाई सहज बनाउन सलमान आफैं लागे ।’
सलमानले पहिलो भेटमै तिमी बडि बिल्डिङ गर्छौ हो ? भनेर सोधेको छिरिङले बताए । आफूले हो भन्ने जवाफ दिएको र सलमानसँग निकै रमाइलो कुराकानी भएको उनी सम्झन्छन् । त्यसको ठीक दुई महिनापछि भुटानमै रहँदा सलमानको नयाँ फिल्म राधेमा अभिनय गर्न फोन कल आएको छिरिङले बताए । पहिलो फिल्म नै सलमानसँग गरेर बलिउड डेब्यू गर्न पाउदा उनी निकै दंग छन् ।
उनी भन्छन्–’बलिउडमा मात्र होइन फिल्ममा आउछु भनेर मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ । मेरो भाग्य र सलमानको कृपाले नचिताएको कुरा पूरा भएको छ । अब यसलाई निरन्तरता दिनेछु ।’